🥇 Ukubalwa kweziguli kumazinyo
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 863
Ividiyo yokubalwa kweziguli kumazinyo
Oda ukubalwa kweziguli kudokotela wamazinyo
Akuyona imfihlo ukuthi amazinyo asephenduke ithandwa kakhulu eminyakeni embalwa edlule, eba yibhizinisi elichumayo uma kunendlela efanele yokuphatha. Wonke umuntu ulwela ukubukeka emuhle futhi imininingwane ebalulekile ekubukeni kwakhe ukumamatheka. Iningi labantu liyazi ukuthi inqubo yokubhaliswa kanye nokuhlinzekwa kwensiza kumazinyo ibukeka kanjani, kodwa bambalwa abantu abacabange ukuthi abaphathi nokubalwa kwezimali kulezi zinhlangano zezokwelapha ezikhethekile zihlelwe kanjani. Omunye wemikhakha ebaluleke kakhulu, mhlawumbe, ukuqapha nokubhaliswa kwamakhasimende. Ukubalwa kweziguli kumazinyo kuyinkqubo enzima kakhulu. Phambilini, bekubalulekile ukugcina amaphepha ephepha ekhasimende ngalinye, lapho kwaqoshwa khona ikhadi lonke lomlando wezokwelapha. Kwakuvamile ukuthi uma iklayenti lithola ukwelashwa ngasikhathi sinye nochwepheshe abambalwa, kwakumele liphathe leli khadi ngaso sonke isikhathi.
Lokhu kuholele ekuphazamisekeni okuthile: amakhadi akhule kakhulu, agcwele idatha. Kwesinye isikhathi zazilahleka. Futhi bekufanele ubuyise yonke idatha, ukuqoshwa okulandelanayo. Odokotela abaningi kanye nemitholampilo bacabanga ngokuhlela inqubo yokubhaliswa kweziguli. Okudingekayo uhlelo lokubalwa kweziguli zamazinyo oluzovumela ukunciphisa ukuhamba kwedokhumende lephepha kanye nokubalwa kwemali okwenziwa ngenxa yekhwalithi yabo empofu nokuntuleka kokwethenjelwa. Isixazululo sitholakele - i-accounting ezenzakalelayo yamakhasimende kudokotela wamazinyo (uhlelo lokwenza ukubalwa kweziguli kumazinyo). Ukwethulwa kwezinhlelo ze-IT zokuphathwa kweziguli zamazinyo ukwenza lula izinqubo zebhizinisi kwenze ukuthi kusheshe kususwe ukubalwa kwamaphepha futhi kuncishiswe umthelela wephutha lomuntu ekusetshenzisweni nasekucutshungweni kwedatha enkulu. Lokhu kukhulule isikhathi sabasebenzi kudokotela wamazinyo ukuze banikele emsebenzini ophelele wemisebenzi yabo eqondile. Ngeshwa, abanye abaphathi, bezama ukonga imali, baqala ukusesha lezo zinhlelo zokubalwa kwezimali zokuphathwa kweziguli zamazinyo kwi-Intanethi, bebuza amasayithi okusesha anemibuzo enjengale: 'landa uhlelo lwe-accounting dentistry patient free'. Kepha akulula kangako.
Lokhu kuvame ukuholela ekutheni izikhungo ezinjalo zezokwelapha zithola uhlelo lwe-accounting software lokulawulwa kweziguli emazinyweni asezingeni eliphansi ngokwedlulele, futhi kwenzeka ukuthi imininingwane ilahleka ngokungenakungabazeki ingekho indlela yokuyibuyisa, ngoba akekho noyedwa ongakuqinisekisa ukuthi iyalulama. Ngakho-ke, umzamo wokonga imali uvame ukuphenduka izindleko eziphakeme kakhulu. Njengoba wazi, ayikho into efana noshizi wamahhala. Uyini umehluko phakathi kohlelo lwekhwalithi ephezulu lweziguli ezibalwa ngamazinyo kanye nekhwalithi ephansi? Into esemqoka ukuba khona kokusekelwa kwezobuchwepheshe kochwepheshe abangochwepheshe, kanye nokukwazi ukugcina inani elikhulu lemininingwane uma nje udinga. Zonke lezi zici ziyingxenye yomqondo 'wokuthembeka'. Izinkampani ezidinga amasistimu eziguli zamazinyo ezihlinzeka ngezimali ukuze zinikeze ukubalwa kwezimali okunekhono futhi okuphelele kweziguli ekwelashweni kwamazinyo kufanele ziqonde into eyodwa ebalulekile - akunakwenzeka ukuthola uhlelo lwamahhala lweziguli ezibala amazinyo. Indlela ephephe kunazo zonke ukuthenga uhlelo olunjalo kanye nesiqinisekiso sekhwalithi kanye nekhono lokwenza ushintsho nokuthuthuka kulo uma kudingeka.
Omunye wabaholi emkhakheni wezinhlelo zeziguli ezibalwa ngamazinyo ukuthuthukiswa kochwepheshe be-USU-Soft. Lolu hlelo lwe-accounting lweziguli ezikudokotela wamazinyo ngesikhathi esifushane kakhulu aluzuzi emakethe yaseKazakhstan kuphela, kodwa nakwamanye amazwe, nakwamanye angomakhelwane. Yini eyenza amabhizinisi ezinhlobonhlobo zebhizinisi akhethe uhlelo lwe-USU-Soft lokuzenzekelayo nokubalwa kwenqubo yokukhiqiza?
Amathempulethi wokuqopha okwenziwe ngomumo asiza kakhulu ekunciphiseni isikhathi esithathayo ukugcwalisa irekhodi lakho lesiguli. Ngaphezu kwalokho, ukutholakala kwama-templates kuqinisekisa ukuthi bonke odokotela bagcwalisa amarekhodi eziguli ezingaphandle ngokwesifanekiso esifanayo. Ukwenza ukuhlelwa kumathempulethi avamile okuqashwa kweziguli asiza ukunciphisa kakhulu isikhathi esidingekayo ukuwagcwalisa nokwenza ngcono umsebenzi wabasebenzi basemtholampilo, udinga ilungelo lokufinyelela elikuvumela ukuthi uguqule izifanekiso ezivamile. Leli lungelo lokufinyelela likuvumela ukuthi uhlele amathempulethi okuqopha iziguli ezingaphandle ngisho nangaphandle kwelungelo lokuhlola ukuhlela amarekhodi eziguli eziphelele. Lapho isiguli sihambela okokuqala, imininingwane ngezikhalazo zesiguli, ukuxilongwa, izimo zamazinyo nezomlomo ingafakwa kulolu hlelo ngokwakha ukuhlolwa kokuqala.
Namuhla, abantu baya ngokuya befuna umhlinzeki wesevisi kwi-Intanethi. Abanye abantu banethezeke ngokwengeziwe besebenzisa izinjini zokusesha zeYandex neGoogle, abanye abantu basebenzisa amamephu, kanti abanye abantu basebenzisa amanethiwekhi omphakathi. Uma umkhiqizo wakho waziwa kabanzi, kulula - abathengi abangaba khona bazofika kusayithi lakho ngokushesha ngokuthayipha igama enjinini yokusesha. Bangashayela besiza noma, uma kukhona ifomu lempendulo, bathumele isicelo. Futhi umuntu uzokuthola ezinkundleni zokuxhumana akubhalele lapho. Izicelo ezivela kumanethiwekhi omphakathi sezivele zifinyelela ku-10% wawo wonke umgwaqo oyinhloko, futhi ezifundeni lezi zibalo ziyakhula nazo. Kungakho-ke kufanele usebenzise uhlelo lokuzenzakalela lwe-accounting yeziguli zamazinyo ezikukhombisa izindlela ezifanele kakhulu zokwenza umkhangiso wenkampani yakho. Thatha isinyathelo sokuqala esizisebenzelayo senhlangano yakho!